कुमारी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २२ चैत २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण कुमारी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २२ चैत २०७५)
on: April 05, 2019 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
कम्पनीले गत आव र अघिल्लो आवकोे गरेर कुल २१ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत आवको ८ दशमलव ५ प्रतिशत र अघिल्लो आवको १२ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले उक्त बोनस शेयर पाउनेछन् । चालूू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले साधारणसभाको आयोजना गरिसक्नुपर्ने हो । तर, कम्पनीले हालसम्म पनि साधारणसभाको आयोजना गरेको छैन । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब १६ करोड छ । कुल २१ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ । ६२ दिनको कारोबार अवधिमा कम्पनीको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी रू. २ सय ५५ र न्यून मूल्य रू. २ सय २७ पुगेको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिसम्म २१ हजार ३ सय ३९ कित्ता शेयर खरीद गर्ने र १९ हजार ९ सय ४९ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
कम्पनीको ६४ दिनको कारोबार अवधिलाई लिएर गरिएको मैनबत्ती विश्लेषणमा अन्तिम दिनमा लङलेग्ड डोजी आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने अथवा बढ्ने कुनै पनि निश्चित संकेत देखाउँदैन । आरएसआई न्युट्रल जोन ५५ दशमलव ५४ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनामा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ३ दशमलव ४४ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा माथि छ । पछिल्लो शेयरमूल्य रू. २ सय ४१ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. २ सय ४७ मा प्रतिरोध पाउने र मूल्य सस्तिएमा रू. २ सय ३७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
कुमारी बैंकमा पाँच सञ्चालक, अध्यक्षमा अमिर प्रताप जबरा
कुमारी बैंकको विशेष साधारण सभा शुक्रवार, के के छन् प्रस्तावहरु ?